HomeKit ichaenderana neAmazon's Alexa | IPhone nhau
Gore rakapera Jeff Bezos wepasi rose akatangisa mubatsiri mutsva akafanana naSiri, Cortana uye Google Zvino, chishandiso icho inogara ichiteerera kune zvese zvingataurwa nevaridzi vayo. Ichi chishandiso chakatumidzwa zita rekuti Alexa, mubatsiri weAmazon, chishandiso chaicho chatinogona kuisa chero mumba uye chiri kuramba ichiteerera kune angangodaro maodha atinogona kuapa isu, kwete isu chete asi chero munhu anozvitarisa, kubvira Wedzera zvigaro kukarenda , ngatitambei rwiyo rwakadai, tinongedze chigadzirwa chatakapererwa nechitoro pane zvakarongwa.
Asi mune dzekupedzisira nyowani zvakare yaita kuti zvikwanise kubatanidza chishandiso ichi mumadhimoni emumba, kuitira kuti tikwanise kuimisa kuti idzime mwenje mumba, kudzikisa mapofu, kubatidza kudziya panguva iyoyo ... Kuti kuwedzere masevhisi atinopihwa nekambani, Amazon ichangobva kuzivisa kuti Alexa ichave inowirirana neKeKKit kuitira kuti tikwanise kudyidzana nechishandiso kuburikidza nechishandiso chakatsaurwa icho chinozovhurwa mushanduro nyowani yeIOS 10 inotevera Gunyana.
Alexa ikozvino inowirirana nemhando dzakasiyana siyana dzakangwara senge switch yekudzora iripi kana kudzima mwenje, thermostat, switch pamwe neabhuru adapter inoenderana neasina kungwara mababu pamusika. Kutenda kubatanidzwa kweA Alexa neKeKKit, zvese izvi zvigadzirwa zvinogona kudzorwa zvakananga kubva mukushandisa kweedu iPhone, iPad kana iPod Kubata kifaa.
Iyo yekubatanidza ichaitwa otomatiki, kubvira isu tinongofanirwa kubatanidza Alexa yedu kuKeKKit kuitira kuti mamwe madhijitari akabatana aonekwe mukushandisa otomatiki, pasina kuawedzera nemaoko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » HomeKit ichaenderana neAmazon's Alexa